2020. Umsebenzi uzoqala kabusha ngoFebhuwari 20
Itshe Elihlanganiswa Metal Roof Tile
I-Wood Shake Tile
I-Fish Scale standard
Isistimu Ye-Gutter Yemvula
Ngemuva kweholide le-Chinese Spring Festival elidlule izinsuku ezingama-40, liholwa nguCovid-19, uForsetra ubuyile futhi waphinde waqanjwa kabusha ngo-20 th kaFebhu. Ethintwe ukushayeka kweCoronavirus, abasebenzi abakwazanga ukuphinda basebenze ngokugcwele, futhi nabaphakeli bethu abanayo imali eyanele, i-YET ethembekile nokusekelwa okuvela kumakhasimende ethu, sikhiqize futhi sithutha izingcezu zamatshe ezingaphezu kuka-200 000 amathayela ophahla aya kwamanye amazwe kungakapheli inyanga eyodwa.
Wonke umuntu uthi umnotho uphenduka omubi kakhulu emhlabeni wonke, ikakhulukazi ekuthengiseni kwamanye amazwe. Besizwile kodwa sibhekana nakho kahle ngenxa yomkhiqizo osezingeni eliphakeme esiwukhiqizayo nedumela elaziwayo emkhakheni. Impilo ayilula kepha ayime, kufanele siqhubeke nayo futhi siyenze ibe ngcono kakhulu.
Masikhulekele usuku lokususa imaski ethu kanye nokuphefumula umoya omusha ongaphandle ukuthi uzoza maduze. Amafayela we-Forsetra Roof, amboze indlu yakho futhi akuvikele ku-Virus ngesikhathi seCovid-19 ----- Uphahla lwakho ngumsebenzi wokuphila kwethu !!!
Isikhathi sokuthumela: Apr-17-2020
I-block3, No.1 Shentang Rd, i-Changkou Town, iFuyang Dist, i-Hangzhou, China